Children of Heaven (စိတ်ချမ်းသာစရာ ခလေးငယ်များ) | maungpeace
Statement of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar →
Children of Heaven (စိတ်ချမ်းသာစရာ ခလေးငယ်များ)
Posted on July 19, 2012	by maungpeace
အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ တတိယဆု မရဘဲ ပထမဆု ရသွားလို့ ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ အလီ ဆိုတဲ့ ခလေး ရဲ့ မျက်နှာ ဟာ သနားဖို့လည်းကောင်း၊ ဟားတိုက်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်နှယ့် ဒီကောင့်နှယ် ပထမ ရလို့ ဝမ်းနည်းရသတုန်း ဆိုတော့ တတိယ ဆု က သူ လိုချင်တဲ့ ကျနော်တော့ ဝေါ့ကင်းရူး (walking shoe) လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီမှာတော့ (Sneaker) လို့ခေါ်တဲ့ ဘိုဖိနပ်ပါ။ ဇာတ်လမ်းက အီရန်က ဖိနပ်ပျောက်သွားတဲ့ ခလေး နှစ်ယောက် နဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစု အပေါ်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ထားတာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ၁၉၉၇ မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ မှာ နိုင်ငံခြားအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ဇကာတင်ရွေးခံရပေမဲ့ လွဲခဲ့ရပါတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစု က မောင်နှမ ဖိနပ်ပျောက်သွားတာလေး ကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ ခလေး တွေ စကားပြောခန်း၊ မိဘ ကို ကူညီတဲ့ အခန်း၊ ကျောင်းသွားတက်တဲ့ အခန်းလေးတွေက ရိုးရှင်းပေမဲ့ အစ္စလာမ်တိုင်းပြည် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အီရန်မှာ ရိုက်ပြထားတဲ့ အတွက် အမြင်ဆန်းနေပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင် ကို ကြည့်ပြီးရင် မူစလင်တွေ အပေါ် ထားရှိတဲ့ အစွဲ တချို့လည်း ပျောက်သွားကောင်း ပျောက်သွားနိုင်တယ် လို့ ယူဆချင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် မူစလင်တွေ ဆိုရင် မိန်းမ လေးယောက် ယူမယ် ဆိုတဲ့ အစွဲပါ။ အဲဒီ ဟာ က အမြဲ မမှန်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော့် အမြင်တော့ ချမ်းသာတဲ့သူ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်တဲ့ သူ သာ ယူကျတာများပါတယ်။ ဥပမာ ဘင်လာဒင် အမျိုးတွေလို မျိုးပေါ့။ ဘယ်နိုင်ငံမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ပြီး ပွေချင် ရှုပ်ချင် ကြသူများက တော့ ဘယ်ဘာသာ တရားရဲ့ အဆုံးအမ ကိုမှ နာခံမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပြသွားတာကတော့ ဆင်းရဲတဲ့သူ က မိန်းမ တစ်ယောက်တည်းရှိတာပါဘဲ။
နောက်တစ်ချက် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်အောင် ရိုက်ပြသွားတဲ့ အခန်းလေး က အဓိက ဇာတ်ကောင်ရဲ့ အဖေ ဖြစ်သူက သကြားတုံးလေး တွေကို ခွဲရပါတယ်။ လဘက်ရည် ထဲမှာ ထည့်ဖို့ဘဲ။ သူတို့ ဘုရား ရှိခိုးပြီးရင် ဗလီ က အလကား တိုက်တယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအခန်းမှာ သူ အဲဒီ လို သကြားတုံးလေးတွေ ခွဲနေတုန်း လဘက်ရည် သောက်ချင်လာလို့ သူသမီးကို ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သကြားတောင်းပါတယ်။ သူ့သမီးလေး က အဖေ ဒီမှာ သကြားတွေ ရှိတယ်လေ ပြောတော့ ဒါ ဘုရားကျောင်းက သကြားတွေ။ ငါ သုံးဖို့ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောပြီး သူ့ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ သကြားကို သာ တောင်းတဲ့ အခန်းလေးပါ။ အင်မတန် ရိုးစင်းပြီး မှတ်သားဖို့ ကောင်းတဲ့ အခန်းလေးပါ။ ရိုးသားဖို့ အတွက် သားသမီးတွေ ကို အထူးတလည် ဆုံးမ စရာ မလိုဘဲ လက်တွေ့ပြလိုက်တဲ့ အခန်း လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘယ်ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမ အောက်မှာ ရှိရှိ လူကောင်း လူဆိုး အမြဲ ရှိတတ်တာကို လည်း သတိပြုမိနိုင်ပါတယ်။
အစ္စလာမ် ဘာသာအကြောင်း နည်းနည်းပါးပါး ပိုသိနိုင်တဲ့ အပြင် အီရန် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချက်လေးတွေကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ အီရန်ဟာ တခြား အရှေ့အလယ်ပိုင်း အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေ နဲ့ မတူပါဘူး။ တခြား နိုင်ငံတွေဟာ တူရကီ က လွဲလို့ အာရပ်လူမျိုးတွေ များပေမဲ့ အီရန်မှာ ပါရှန်း တွေများပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အစ္စလာမ်ဂိုဏ်းခွဲ လူနည်းစု ဖြစ်တဲ့ ရှီးယား (Shia) မူစလင်ဟာ အီရန်မှာ လူများစု ပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေ နဲ့ တကမ္ဘာလုံးမှာတော့ ဆူနီ (Sunnis) တွေက အများစု ဖြစ်ပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပြောရရင် ဆူနီ မူစလင်က တကမ္ဘာလုံးမှာ ၈၀ % ကျော် လောက်ရှိပြီး ရှီးယား က ၁၀ က နေ ၁၅% သာ ရှိတာပါ။ အီရန်မှာတော့ ၉၀% က ရှီယားမူစလင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ အပိုစာသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင် အကြောင်းပြန်ဆက်ရရင် တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆင်းရဲလို့ မပြည်စုံလို့ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် ယုံကြည်မှု အားနည်းတတ်တဲ့ သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကို ဥယျာဉ်မှူး အလုပ်လိုက်တောင်းတဲ့ အခန်းမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ ခြံစည်းရိုး အမြင့်ကြီးတွေ ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ အလုပ်လိုက်တောင်းရတဲ့ သူတို့ ရဲ့ သိပ်ငယ်မှု ကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်က ဝင်ဒါမီယာ နဲ့ အင်းယားမြိုင်ကို တောင် သတိရမိသေးပါတယ်။ စေတနာ ကောင်းတဲ့ သူဌေး အဖိုးကြီးပေးတဲ့ လုပ်ခဟာ လည်း တလလုံး နီးပါး လုပ်မှ ရတဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ ညီမျှပြီး အလီ တို့ သားအဖ နှစ်ယောက် အဲဒီ ပိုက်ဆံလေး နဲ့ ဘာတွေဝယ် ကြမလဲ စိတ်ကူးယဉ် ကြတာလည်း ကြည်နူးစရာပါ။ နောက်တစ်ချက် က အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေ တော်တော်များများရှိတယ် လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ အဝေးပြေးလမ်းမ ပေါ်မှာ စက်ဘီး တက်မောင်းတာတော့ ရင်ထိတ်စရာပါ။ အဖေ ရိုက်မှာ စိုးကြောက်တာ၊ ညီမလေး ဖိနပ်ပျောက်သွားလို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက် ကျောင်းတက်ဖို့အတွက် ဘိုဖိနပ် တစ်ရံ ကို တစ်ယောက်တစ်လှည့် အပြေးအလွှား ပြောင်းစီးရတာ၊ ညီမလေး က သူ့ ဖိနပ်ကို တခြားလူ စီးထားတာ မြင်ပေမဲ့ သူတို့ ထက် ဆင်းရဲမယ်လို့ ထင်ရပြီး မျက်မမြင် အဖေကြီးရှိနေတဲ့ မိသားစု က ခလေး ဖြစ်နေလို့ ပြန်မတောင်းရက်တာတွေဟာ မဆန်းပေမဲ့ အင်မတန် ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ တခါတလေ မြန်မာပြည် က ဒါရိုက်တာတွေ ဒါမျိုး လေးများ ရိုက်လို့ မရလို့များလား လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေး က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ဖြစ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရ လို့ စိတ်ချမ်းသာ တဲ့ ရုပ်ရှင် ထဲမှာ ဒီကားပါတယ်။
ဒါကတော့ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို ပြန်ကြည့်နိုင်အောင်လို့ပါ။
This entry was posted in movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း) and tagged children, Iran, Islam. Bookmark the permalink.
One Response to Children of Heaven (စိတ်ချမ်းသာစရာ ခလေးငယ်များ)